လှည့်မထွက်နိုင်သေးတဲ့အခါ ပိုပြီးမချစ်မိအောင်နေပါ … – Shinyoon
တချို့က သိပ်ချစ်တတ်ပေမယ့်လဲ ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေးတတ်ဘူးလေ … သူတို့သိပ်ချစ်သလောက် ပြန်ရလာတာဆိုလို့ ဒဏ်ရာတွေပဲ ရှိနေတတ်တယ် အဲ့လောက်နာကျင်နေပြီပဲ လှည့်ထွက်ခဲ့လိုက်လို့ ပြောချင်ပေမယ့် လှည့်မထွက်နိုင်သေးတဲ့ လူတွေလဲရှိသေးတယ်
ကိုယ်က သူ့ကို မချစ်ပဲမနေနိုင်သေးတဲ့အခါ ဒီထက်ပို မချစ်မိအောင်ပဲ ကြိုးစားပါ … ကိုယ်ချစ်ရင်ချစ်သလောက် ကိုယ့်ပဲပြန်ပြီးနာကျင်နေရမှာလေ … အရင်တုန်းက သေချာတဲ့အရာတွေရှိလို့ကိုယ်ဟာ အနာဂတ်တွေအထိ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ဝေးရမှာပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ ရှိထားဖို့လိုပြီ
သူမရှိတော့ရင်လို့မတွေးပဲ ကိုယ်ချစ်ပေးနိုင်သလောက် ချစ်ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံတဲ့ စိတ်လေး ထည့်ထားပါ ပြီးတဲ့အခါ သူဘာကြောင့် ငါချစ်တာကို မသိရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ မရတဲ့အဖြေတွေကို မရှာပဲ တန်ဖိုးဆိုတာ သိတဲ့လူအတွက်ပဲ တန်ဖိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ်
လှည့်မထွက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် ရပ်နေလိုက်ပါ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုမချစ်မိစေဖို့တော့လိုမယ် လွယ်လွယ်ကူူကူလေး ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်တော့လဲ လွယ်လွယ်ကူကူလေး ဘယ် လက်လွှတ်နိုင်ပါ့မလဲ အိပ်မက်တွေမက်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်မက်တတ်အောင် လုပ်ပါ အနာဂတ်ဆိုတာကို တွေးမိတဲ့အခါ ကိုယ်တစ်ယောက်လည်း ဆက်လျှောက်ရဲတဲ့ သတ္တိလေး မွေးပါ ..
ခုချိန်မှာတောင် ဒီလောက်နာကျင်နေရရင် ပိုပြီးချစ်မိသွားတဲ့အခါ ပိုပြီး နာကျင်နေရတတ်တယ်လေ …. ပိုပြီး မချစ်မိအောင်နေရင်းပဲ ရပ်နေလိုက်ပါ … အချိန်တန်တဲ့အခါ လှည့်ထွက်ရဲလာလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် ဆက်ပြီး မနာကျင်ချင်တော့တဲ့အခါပေါ့ …
လွည့္မထြက္နုိင္ေသးတဲ့အခါ ပုိျပီးမခ်စ္မိေအာင္ေနပါ …
တခ်ိဳ႔က သိပ္ခ်စ္တတ္ေပမယ့္လဲ ကံၾကမၼာက မ်က္ႏွာသာမေပးတတ္ဘူးေလ … သူတို့သိပ္ခ်စ္သေလာက္ ျပန္ရလာတာဆိုလို့ ဒဏ္ရာေတြပဲ ရွိေနတတ္တယ္ အဲ့ေလာက္နာက်င္ေနျပီပဲ လွည့္ထြက္ခဲ့လုိက္လို့ ေျပာခ်င္ေပမယ့္ လွည့္မထြက္နုိင္ေသးတဲ့ လူေတြလဲရွိေသးတယ္
ကို္ယ္က သူ့ကို မခ်စ္ပဲမေနနိုင္ေသးတဲ့အခါ ဒီထက္ပို မခ်စ္မိေအာင္ပဲ ၾကိဳးစားပါ … ကိုယ္ခ်စ္ရင္ခ်စ္သေလာက္ ကိုယ့္ပဲျပန္ျပီးနာက်င္ေနရမွာေလ … အရင္တုန္းက ေသခ်ာတဲ့အရာေတြရွိလုိ ့ကိုယ္ဟာ အနာဂတ္ေတြအထိ စိတ္ကူးေတြ ယဥ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ေန့ေန့မွာေတာ့ ေ၀းရမွာပဲဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ရွိထားဖို့လုိျပီ
သူမရွိေတာ့ရင္လုိ ့မေတြးပဲ ကိုယ္ခ်စ္ေပးနုိင္သေလာက္ ခ်စ္ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကုိယ္လံုတဲ့ စိတ္ေလး ထည့္ထားပါ ျပီးတဲ့အခါ သူဘာေၾကာင့္ ငါခ်စ္တာကို မသိရတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ မရတဲ့အေျဖေတြကို မရွာပဲ တန္ဖိုးဆိုတာ သိတဲ့လူအတြက္ပဲ တန္ဖိုးရွိတတ္တယ္ဆိုတာ သိထားဖို့လုိတယ္
လွည့္မထြက္နုိင္ေသးဘူးဆိုရင္ ရပ္ေနလုိက္ပါ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုမခ်စ္မိေစဖို့ေတာ့လုိမယ္ လြယ္လြယ္ကူူကူေလး ခ်စ္ခဲ့တာ မဟုတ္ေတာ့လဲ လြယ္လြယ္ကူကူေလး ဘယ္ လက္လႊတ္နုိင္ပါ့မလဲ အိပ္မက္ေတြမက္တဲ့အခါ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္မက္တတ္ေအာင္ လုပ္ပါ အနာဂတ္ဆိုတာကို ေတြးမိတဲ့အခါ ကိုယ္တစ္ေယာက္လည္း ဆက္ေလွ်ာက္ရဲတဲ့ သတၱိေလး ေမြးပါ ..
ခုခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီေလာက္နာက်င္ေနရရင္ ပိုျပီးခ်စ္မိသြားတဲ့အခါ ပိုျပီး နာက်င္ေနရတတ္တယ္ေလ …. ပိုျပီး မခ်စ္မိေအာင္ေနရင္းပဲ ရပ္ေနလုိက္ပါ … အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ လွည့္ထြက္ရဲလာလိမ့္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ျပီး မနာက်င္ခ်င္ေတာ့တဲ့အခါေပါ့ …
ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာတဲ့အခါ တကယ်ပဲ သွေးအေးတတ်သလား …